QIIMAHA - DHULKA
Waa Maxay Dhul.
Markaan dhul leeyahay kama wado aduunyo. Magaca dunyaa Carabi ahaan labo micno ayaa lagu sheegaa: midii dhowayd ee tagaysay ama mid liidata oo xaqiir ah. Marka dunyaa laga hadlayo nasuustu waxay xustaa inay tahay wax xaqiir ah. Sida uu Allaah uleeyahay Suurat Al-Xadiid aayadeeda 20-naad (Ogaada nolasha aduunyadu waa cayaar iyo wax lagu habsaamo). Waatii Xadiiskii Jaabir Binu Cabdullaahi ee Saxiixul Muslimka ku jiray uu lahaa Nabiga (SCW) oo ay Asxaabtii hareero socdaan ayay Soo mareen Suuq, waxuu dhegaha qabtay neef bakhti ah oo dhego yaryar leh. Nabigu (SCW) wuxuu yiri midkee ku rabilahaa inuu ku gato hal dirham? Asxaabtii waxay dhaheen ma jeclin inaan shay nooga baxo waxna kuma falayno. Nabigu wuxuu waydiiyey inay jecelyihiin inay bilaash ku qaataan. Waxay dhaheen iska daa isagoo bakhtiyee xataa haduu noolyahay ceeb buu nala yahay maxaa yeelay wuu dhego yaryaryahay. Nabigu (SCW) wuxuu yiri Ilaah baan ku daartee, Ilaahay aduunyadu waa ugu qiima yartahay sida bakhtigaan adinka idiin la qaymo yaryahay. Xadiiskaan oo kale waxaa wariyey Tirmidhi iyo Imaam Al-Axmed. Xadiis baa jira uu Nabigu (SCW) leeyahay, Allaah haday aduunyadu qiimo la leedahay oo ay udhiganto garab kaneeco qof gaal ah koob biyo ah kama siiyeen. Waxaa wariyey Tirmidi iyo Ibnu Maajah laakiin raawi ku jira Ruwaada Tirmidi waa dhaciif.
Qofkii lagu yiraahdo wiil aduunyo ama gabar aduunyo waa qof dadnimadiisa la liiday ama diintiisa la duray. Laakiin dhulku waa ka duwanyahay oo waa la isu tiirshaa sida dhulkayga, meeshaan ku dhashay IWM.
Macalinkii Bayolajiga ii dhigayey dugsiga sare 80-meeyadii wuxuu geyiga ku sheegay:
“Geyi waa degaan xasiloon ay ku macaamiloonayaan wax nool iyo waxaan noolayn iyadoo waxyaabaha nolasha muhiimka u ah sida biyaha, baadka, iyo hawada ay jiraan. Macalinku wuxuu sidoo kale sabo ku macneeyey halka uu nooluhu uga noolyahay geyiga oo uu ka helayo cunto, hoy, nabad iyo saarasho”.
Runtii qeexida dhulka waxaan kusoo qabiri karaa qeexidii macalinkaas uu siiyey geyiga oo aan ku daro diintaas Samaawiga ah ee Islaamka. Biolajigii wuxuu isu keenay oo xusay in noolaha iyo manoolaha ay isku xiranyihiin iska daa noolayaasha dhexdooda ama dadka. Diinta waxaa soo dajiyey Xakiim Isagaana noo sheegaya xuquuqda ka dhaxaysa noolaha iyo manoolaha iyo noolaha dhexdooda. Ha hilmaamina xuquuqda uu Ilaah dhexdhigay muslimiinta dhexdooda khaas ahaan. Deriska gaalada ee degen dhul muslim iyagu laftoodu xaquuq bay helaan. Wadankaan aan joogo Dariska hadaysan ku dhibin nasiib baad leedahay xitaa salaanta waa gabeen.
Dhulku waa halka uu madaxeena kusoo dhacay ama xudunteenu ku xabaalantahay. Geyiga aan ka dhigno wadankeena oo dhan ama dheh dhulka muslimiinta. Sabadana magaalada aan ku dhalanay ama aan degenahay.
Yaa horeeyey dadka iyo dhulka.
Hadii aan akhrino aayada 55-naad ee Suurat Dhaahaa wuxuu Allaah Quraanka ku leeyahay hadaan Afsoomaali ahaan micnaha u dhahno. Dhulka xagiisa ayaan idin ka abuurnay, dhexdeeda ayaanan idiin celinaynaa, xageeda ayaana la idin ka soo saaraynaa mar kale. Waxaa halkaas ku cad inaan dhulka ka nimid.
Yaa noo sharciyeeyey degitaanka dhulka?
Soomaalideenu dhulkeena aad uma jeclin. Arintaas Soomaalidu iyagaa markhaati ka ah. Gaalo cad, mid madoow iyo muslim wax xaga wadaninimada nooga liita lama hayo. Marka ma sharci daro ayaan dhulka kusoo degnay?
Aayada 36 ee Suurat Al-Baqarah, Ilaahay oo la hadlaya Nabi Aadam iyo Xawaa iyo waliba Ibliis wuxuu leeyahay (ka hoobta yacnii janada oo u hoobta dhulka idinkoo qaarkiin qaarka kale uyahay cadow, dhulkana waxaa idiin ku sugan degaan iyo raaxo ilaa waqti).
Waxaa kale oo uu Ilaah aayada 29-naad ee isla Al-Baqarah ku leeyahay (Allaah waa kan idiin abuuray waxa dhulka ku sugan dhamaan).
(Wuxuu yiri (Eebe) dhexdeedaad ku noolaanaysaan dhexdeeda ayaad ku dhimanaysaan xageedaana la idin ka soo saarayaa). Aayada 25-naad ee Acraaf.
Waxaan halkaas ka ogaanay in dhulkaas Ilaah noo gartay marka waa inaan xafidno ee sidii wax aynaan lahayn aynaan u dhaqmin.
Waxaa ku xigi doona cutubyadii kale oo uu usoo horeeyo qiimaha dhulka oo ah cutub tiro badan. Waxaan isku dayidoontaa inaan isagoo dhan hal mar soo gasho hadii Ilaah idmo.
Waxaan ku arki doonaa hadii Ilaah idmo cutubka soo socda Nabi Muxamed (SCW) oo inta Makkah jaleeca markii laga saarayey leh waxaad tahay arlada mida xagayga loogu jecelyahay hadii aan Qoomkaagu iga soo saareen kaama baxeen.
Waxaa kaloo iga yaabiyey qisadii wiilkii Nabi Nuux ee markuu Allaah beeniyey kalsoonidii gashaday dhulka. Waatii markii la yiri doonta fuul uu yiri waxaan biyaha ka fuulayaa buurta. Hada hadii Soomaali loo keeno doon ama diyaarad oo la yiraahdo soo fuula wadama galbeedka ah ayaa la idin geynayaaye yaa tolow ka hari lahaa!!
La socda Qayta Labaad.
Faafin: SomaliTalk.com | Oct 16, 2002